Miarakap manohana PME: 30 miliara ariary mandritra ny 10 taona | NewsMada
Miarakap manohana PME: 30 miliara ariary mandritra ny 10 taona
Anisan’ny firenena mahantra indrindra maneran-tany i Madagasikara, na misy ihany aza izao ireo mpandraharaha mampiasa vola hananganana orinasa madinika sy salantsalany. Maro amin’ireo vao manomboka ny mahita famatsiam-bola.
Maro ireo seha-pihariana hisafidianan’ny mpandraharaha, ireo efa am-perinasa na ireo vao manomboka miasa. Ny tsikaritra anefa, saika hita amina sehatra maro ireo vao manomboka, saingy sahirana izy ireo vao mahita famatsiam-bola. Misy ihany ny fanampiana azy ireo amin’ny tetikasa nofaritany, mitady mpanohanana na fanampiana amin’ireo mpila ravinahitra any ivelany hamatsiana ny tetikasa eto an-toerana.
Ohatra amin’ny mpanohana ny Miarakap, tsy latsaky ny 30 miliara ariary ny vola ampiasaina mandritra ny 10 taona ho avy hanohanana orinasa 40, ka efatra na dimy isan-taona amin’ireo. Tsy maintsy hitadiavana vahaolana miaraka, Miarakap sy ireo orinasa madinika, tantanin’ny Malagasy, tsy maintsy manana finiavana, mahita famatsiam-bola ho fanatanterahana ny tetikasa hampisy vokatra tsara. Hita anefa fa manahirana ny fahitana famatsiam-bola, ka manampy betsaka azy ireo ny Miarakap.
Famatsiam-bola 50 tapitrisa hatramin’ny 1 miliara ariary
Misy mpitantana vahiny ao amin‘izany, miverina eto Madagasikara, vonona hanampy ny fiaraha-miasa eo amin’ny Frantsay sy Malagasy. Misy koa ny vondrona na fikambanana hafa miara-miasa amin’ny Miarakap ho fanampiana ny fihariana amin’izay ataon’ireo PME manerana ny Nosy, ka ny famatsiam-bola ho an’izany, eo anelanelan’ny 50 tapitrisa hatramin’ny 1 miliara ariary. Manatevina ny tahiry efa misy ry zareo ary miray ombon’antoka amin’ny ampahany kely amin’ny vola miasa mandritra ny dimy taona.
Fiaraha-miasa ny fanohanana sy fanofanana ireo mpiasa, araka izay ilain’ny orinasa, anisan’izany ny fahaiza-mitantana, ny fifehezana ny lafiny teknika, ny fanafainganana ny fifanarahana ara-barotra. Betsaka ireo miara-miasa ho fanampiana ny PME, toy ny banky SG, BNI Madagascar, fa eo koa ireo orinasa maro hafa, ny fiantohana any ambanivohitra (Adéfi) sy ireo olon-tsotra mampiasa vola na ireo Malagasy monina any ivelany.
Betsaka ihany koa ny fifanarahana hafa hanampiana ireo PME ireo, toy ny fanafaiganana ny fanadihadiana ny antontan-taratasy, zana-bola mora hifaninanana, fitantanana mangarahara. Maro ny fepetra fa takina voalohany, ny orinasa madinika efa niasa tsy latsaky ny iray taona, ny mpitantana azy dia tera-tany malagasy 21 hatramin’ny 65 taona.